नाम मात्रैका क्वारेन्टाईन नबनाऔं - जनमुखी खबर नाम मात्रैका क्वारेन्टाईन नबनाऔं - जनमुखी खबर नाम मात्रैका क्वारेन्टाईन नबनाऔं - जनमुखी खबर
नाम मात्रैका क्वारेन्टाईन नबनाऔं
जेठ ०८, २०७७
तुलसीपुर,८ जेठ ।
केहि दिन यता नेपालमा पनि कोरोना भाईरस संक्रमित संख्या बढ्दै गएको छ । विश्वमा नै महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाको जोखिम नेपालमा बढ्दै जान थालेको छ । नेपालमा हाल सम्म २ जनाको ज्यान गईसकेको छ । संक्रमतिको संख्या ४ सय ४४ पुगेको छ । विषेश गरि छिमेकि देश भारत संग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा कोरोनाका संक्रिमित देखिएका छन । बाँकेमा सबैभन्दा बढि संक्रमित देखिदा उनिहरु भारत बाट आएकाहरु हुन ।
रोजगारका सिलिसिलामा भारतमा गएकाहरु अहिले फर्किने क्रम चलिरहेको छ । उनिहरु दैनिक जसो नाका क्षेत्रबाट आईरहेका छन । यसले अझ जोखिम बढेको छ । बुधवार मात्रै बांकेको जमुहनाह नाकाबाट एक हजार बढि नेपाली भित्रिएका छन । भारतबाट नेपाल आएकामा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका तथा प्रदेश नं ५ का बाँके, बर्दिया, दाङ र प्युठानका एक हजार ३ सय २५ जना छन् । सबैभन्दा धैरै दैलेखका ५०१ जना छन् । अव उनिहरु लाई कँहा राख्ने ? अहिलेको मुख्य चुनौती नै यहि हो । भएका क्वारेन्टाईन थोरै बेडका छन ।
कतिपय भएकाहरु पनि गञ्जागोल हुदा झनै जोखिम निम्तीने अवस्था छ । यहि जोखिमलाई मध्यनजर गरि दाङका सवै पालीकामा क्षमता बढाउने निर्णय भैसकेको छ । यसका लागि जिल्लाका सबै पालीकाले तयारी थालि सकेको छन । कपिय वडामा समेत क्वारेन्टाईन बनाईएको छ । अव यी क्वारेन्टाईनको क्षमता सगैं मापदन्ड समेत पुरा हुनुपर्छ ।
हरेक टोलमा भारतबाट आईरहेको अवस्थामा वडा स्तरमा बनेका क्वारेन्टाईन नाम मात्रैका नभई हरेक दृष्टिकोणले सुरक्षित खालको बनाईनुपर्छ । यसका साथै भारतबाट आएका नेपालीहरुलाई क्वारेन्टाईन सम्म बस्नका लागि प्रेरीत गर्न सबैले भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
सडक सुधार र अनुगमनमा ध्यान दिऊँ
वडा सरकार अबत केहि गर
कोरोना रोकथाममा हेलचक्र्याई नगरौं
तुलसीपुर उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ सहित)
असार ०७, २०७९
उरहरी चाेक हुदै दामाेदर जाेड्ने सडक कालाेपत्रे हुने
असार ०८, २०७९
बाँफिकाेटका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधिलाई सम्मान
असार ०९, २०७९
कारागारमा रहेकी एक महिलाले छाेरा जन्माईन
विद्यालय कर्मचारी परिषद् तुलसीपुरले बुझायाे मागपत्र
सुकौराकोट मिडिया प्रालीद्धारा संचालित
सूचना विभाग दर्ता नं. : २८२१/०७८-०७९
सम्पादक: बसन्त परियार
सुकौराकोट मिडिया प्रालीद्धारा सञ्चालीत जनमुखी खबर डिजिटल पत्रिका हो । जनताका संग जोडिएका समस्या लाई उजागर गरि समाधानका लागि हामि माध्यमका रुपमा आएका छौं ।
तुलसिपुर उ.म.न.पा., ६, दाङ
© 2020 Janamukhi Khabar | All Rights Reserved